बलिउडमा पारिश्रमिक विवाद, करिनाको स्थानमा कंगना « Kathmandu Pati
काठमाण्डु – पछिल्लो समय बलिउडमा पारिश्रमिकको विषयमा चर्चा हुन थालेको छ । यसअघि यस किसिमको चर्चा नभएको होइन, तर यसपटक भने एकपछि अर्काे कलाकारले पारिश्रमिको विषयलाई बुलन्द बनाइरहेका छन् । फिल्ममा हिरोको तुलनामा पारिश्रमिक निकै कम हुने भएकाले हिरोइनहरूले यसपटक आफ्नो आवाजलाई बुलन्द बनाइरहेका छन् ।
‘बलिउडमा हुने पे ग्याप हास्यास्पद छ । म परम्पराको खिलाफमा छु । यसरी बोल्दा मैले फिल्म पाउँदिन भने पनि मलाई केही मतलब छैन ’ सोनामले एक भारतीय पत्रिकासँग भनेकी छिन् । एसएस राजमौलीका पिता केवी विज्येन्द्र प्रसादको फिल्म ’सीता’ मा करिनाले १२ करोड पारिश्रमिक मागेपछि बलिउडमा पारिश्रमिक बहस सृजना भएको हो । तर, सीतामा करीनालाई नराखेर कंगनालाई लिइएको छ ।
मुटु स्वस्थ राख्न चाहनुहुन्छ ? यस्ता खानेकुरा खानुहोस्
काठमाण्डु – स्वस्थ रहनको लागि हामीले खानपानमा ध्यानदिनु आवश्यक छ
के तपाईँको स्मरण शक्ति कमजोर छ ? अपनाउनुहोस् यस्ता उपाय
काठमाण्डु – स्मरण शक्तिले भावी जीवनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ